Daraasad cusub oo lagu ogaadey Halista Hilibka Cas, iyo Faa'iidada Hilibka cad – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Daraasad cusub oo lagu ogaadey Halista Hilibka Cas, iyo Faa’iidada Hilibka cad
Daraasad cusub oo lagu ogaadey Halista Hilibka Cas, iyo Faa’iidada Hilibka cad
Beegsonews: – Daraasad cusub oo lagu sameeyay Harvard ayaa muujisay caddeyn cilmiyeed oo cusub oo ku saabsan halista cunista hilibka casaanka caafimaadka, waxaana lagula taliyaa in laga fogaado hilibkan intii suurtogal ah, cimri dheeri.
Daraasaddan, oo lagu daabacay joornaalka caafimaadka ee BMG ee Ingiriiska, waxay ku soo gabagabowday caadooyinka cunista hilibka waxay u horseedi kartaa halista dhimashada dhegdhega ama cimri gaabni
Sida lagu xusay daraasadda, kordhinta cunista hilibka nus maalin keliya waxay kordhisaa halista dhimashada horraantii sanadka 10 boqolkiiba.
Daraasadda ayaa lagu ogaaday in ku beddelashada hilibka ilo kale oo borotiin ah, sida digaagga, kalluunka, nuts, digiraha iyo khudradda, ay ka caawin karto dadka inay cimri dheeraadaan oo ay ka fogaadaan halista dhimashada aan horay u dhicin.
Daraasadda ayaa lagu ogaadey in kordhinta cunista hilibka cas ay la xiriirto halista geeri, iyo in halista ugu weyn ay la xiriirto kuwa kordhiyay cunista hilibka cas ee la warshadeeyay.
Daraasadu waxay xustay in hilibka cas ee yar iyo ku tiirsanaanta cunnooyinka kale ee borotiinka ay la xiriiraan qatar yar oo dhimasho ah 8 sano.
Daraasadda ayaa sidoo kale tilmaamtay ahmiyadda ay leedahay rajo wanaagga cimriga dheer, yididiiladu ma ilaaliso oo keliya wadnaha, maadaama daraasadihii hore ay shaaca ka qaadeen xiriir toos ah oo ka dhexeeya isaga iyo helitaanka jir caafimaad qaba, halkaasoo nidaamka difaaca jirku ka xoog badan yahay, iyo shaqeynta sambabbada.
Previous articleBootarka caruurt ee Johnson & Johnson oo kansar laga Qaadayo iyo Gabadh $40milyan oo magdhow ka heshay Shirkada
Next articleTrump oo ku dhaleeceeyey Dimuqraadiyiinta inay waqti kaga luminayaan “wax aan micno lahayn
5 meelood oo la saadaaliyay in dagaalkii 3aad ee dunidu ka...
7 Arrimood oo Sir Ah oo Dhadhan Wanaagsan u Yeela Nolosha...